"The Herald", a government-run newspaper, reports that Robert Mugabe, the President of Zimbabwe, will not attend the re
''The Herald'', a government-run newspaper, reports that Robert Mugabe, the President of Zimbabwe, will not attend the regional crisis meeting in Lusaka, Zambia, to discuss the crisis over the 2008 presidential election.
Zimbabweans go to the polls for a runoff election with the President of Zimbabwe Robert Mugabe expected to be reelected following the withdrawal of Morgan Tsvangarai of the opposition Movement for Democratic Change.
2008-06-27 (Context: President of Zimbabwe, Robert Mugabe, run-off presidential election)
The opposition Movement for Democratic Change proposes a power sharing arrangement with the President of Zimbabwe Robert Mugabe's party, the Zimbabwe African National Union, but not involving Mugabe.
2008-05-2 (Context: President of Zimbabwe, Robert Mugabe, run-off presidential election)
2018-04-20 (Context: President of Zimbabwe, Robert Mugabe)
2017-11-21 (Context: President of Zimbabwe, Robert Mugabe)
President of Zimbabwe Robert Mugabe is fired as the leader of ZANU-PF and replaced with former Vice President Emmerson Mnangagwa.
2017-11-19 (Context: President of Zimbabwe, Robert Mugabe)